Dheehannada infrared-ka u dhow waxay muujinayaan nuugista nalka agagaarka infrared-ka u dhow 700-2000 nm. Nuugiddooda daran waxay caadi ahaan ka soo bilaabataa wareejinta lacag ee dheeh dabiici ah ama isku-dhafan bir ah. Waxyaabaha u dhow nuugista infrared-ka waxaa ka mid ah midabbada cyanine-ka oo leh polymethine ballaaran, dheehyada phthalocyanine ...
Midabada UV-da ee ilayska UV
Markay ku hoos jirto iftiinka muuqda, budada UV fluorescent waa cadaan ama ku dhowaad hufan, oo ku faraxsan hirarka dhaadheer ee kala duwan (254nm, 365 nm) waxay muujinayaan hal ama in ka badan oo midab dhaadheer leh, Shaqada ugu weyn ayaa ah in laga hortago kuwa kale inay been abuuraan. Waa nooc midab leh farsamo sare, iyo midab wanaagsan oo qarsoon ....
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan soo saarnay waxaa ka mid ah midabka sawir qaadaha, midabka thermochromic, midab UV, midab luul, dhalaalaya midabka madow, faragelinta isbadalka indhaha, waxay caan ku yihiin daahan, khad, caag, rinji, iyo warshadaha qurxinta. Waxaan sidoo kale siinaa oo aan u habeynay dheehan iyo pi ...